AL Shabaab Dharka Ciidanka ayey Qaataan ee Dharka shacabka maqaataan - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
AL Shabaab Dharka Ciidanka ayey Qaataan ee Dharka shacabka maqaataan
April 14, 2019 at 16:42 AL Shabaab Dharka Ciidanka ayey Qaataan ee Dharka shacabka maqaataan2019-04-14T16:42:30+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, ayaa isagoo ka hadlaya Banaan-baxyo looga soo hor-jeeday dilalka Ciidamada Dowladdu u geysanayaan Dhalinyarada ku shaqeysata Mooto-bajaajta,
waxaa uu sheegay in Dadka banaan-baxyada wada ay ku jiraan Kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab. hadalkaa oo ah mid Xaqiiqda ka Fog.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hor hadlayay Shacab la isku soo uruurshay ayaa sheegay in Dowladdiisu ay shacabku doorteen, ayna cagta marinayso haatan cid walba oo diidan Hab-dhaqankeeda,taas oo u muuqatay in Madaxweynuhu uusan ogeyn wax aka dhalan kara hadalkiisa.
Magaalo Mogadisho oo shacabka degani wali hubka laga dhigin wax dib u heshiisiin ahna aaney jirin. oo hubka lagu aruuriyo.
Madaxweyne Farmaajow Moqdisho waa Danbas dab ka hooseeyo hadal kaagu yaanuu gubin villa somalia oo waqti badan lagu soo dhisay
Madaxweyne Farmaajo hadalkan uu shalay Jeediyay ayaa u Muuqday mid Siyaasadeysan, Sidoo kalena uu ku marin habaabinayo Fashilada aan indhaha ka qarsoomi Karin ee ay wajaheyso Xukuumadda uu Raysal wasaare khayre oo u baahan in la badalo.
Waxaa uu eedeeyn lala yaabay u jeediyay Shacabka Banaan-baxa ka dhigayay Muqdisho, kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ku jiraan Argagixiso, kasoo hor jeeda Dowladda uu isagu Hoggaamiyo, isagoo sheegay in aysan yeeli doonin Banaan-baxyo looga soo hor-jeedo falalka ammaan-darro eek a jirta Muqdisho.
eedeeynta uu u jeediyay Madaxweynuhu Shacabka ee uu ku eedeeyey nay ku jiraan Argagixiso ayaa abuurtay hadal heyn,
Waxaana ii muuqda in Madaxweynuhu uu iska indha tirayo Xaqiiqada ah in laamaha ammaanka Soomaaliya ay si weyn ugu dhex-milantay Argagixisadu.
Al-Shabaab ayaa sida ay muujinayaan Warbixino kala duwan oo ay soo saareen Dowladdo iyo Hay’addo Caalami ah, Saameyn ku leh gudaha Hay’adaha amniga Soomaaliya, Iyagoona si toos ah u hela Dharka iyo Astaamaha kale ee Ciidanka Dowladda,
kuwaas oo ay ku fuliyaan Weerarada Xarumaha Dowladda.
Sidoo kale, Kooxda Al-Shabaab ayaa si dhow u hesha Xogaha Sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa kale ee ay lasoo wadaagaan Hay’adda NISA iyo Xafiisyada kale Dowladaha Caalamka ee ay ka midyihiin Mareykanka iyo Ingariiska.
Madaxweyne 8 Febaraayo 2017-kii, Wixii ka horeeyay Umadda Soomaaliyeed waxaad la laheyd Qiimo iyo in aad tahay Waxgarad Soomaaliya Hoggaamin kara hadba waxa ay mudan tahay, taas oo ah tan sababtay inaad shacabka ugu goodido idinkaa I rabay, maantana ma diidi kartaan dhaqankeyga cusub.
Dowladda aad Hoggaamiso waxaa u haray wax ka yar 2 Sanno, waxaana ku fashilantay dhamaan Balanqaadyadii aad u sameysay Shacabka Doorashadaadii ka hor iyo ka dib, taas oo meesha ka saartay sida aan arko kalsoonidii Shacabku ku qabeen Dhamaan Siyaasiyiinta Soomaaliyeed,
sidoo kalena jecleysiisay inay ku hamiyaan inay dib u hoggaamiyaan kuwo Dalka jiheyntiisa ku fashilmay.
Madaxweyne Waxaan ku soo jeedinayaa in aad u soo daadegto Xaqiiqada Cad ee aadan marnaba marin habaabin Karin, Sidoo kalena adiga oo aan is jeexin aad u shaqeyso Sanadka iyo Bilaha kuu haray in Culeyska laga dejiyo Shacabka Muqdisho,
dalkana loo diyaariyo Doorasho lamid ah tii aad ku timid eek u dhacday Nabada iyo Is-ogalaanshaha.
« Manchester City Oo Guul Muhiimad Weyn Leh Kasoo Gaadhay Crystal Palace, Raheem Sterling Oo Laba Gool Dhaliyay & Sky Blues Oo Si KMG Ah U Qabtay Hoggaanka PL.
Fahad Yaasiin oo ku goodiyay inuu dacwad ka gudbinayo xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka »